विज्ञान-प्रविधि – Karnalitimes
सुर्खेत । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबियाचौर र विद्यापुरमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा सुरु भएको छ । यी दुई ठाउँमा मंगलबार देखि फोरजी सेवा सुरु गरिएको हो । विशेषगरी जिल्लाका सदरमुकाममा र आसपासका क्षेत्रमा मात्र फोरजी सेवा दिइरहेको टेलिकमले पश्चिम सुर्खेतमा पहिलो पटक सेवा विस्तार गरेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले पश्चिम सुर्खेतमा नेटवर्क अपग्रेड तथा गुणस्त
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत ५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । गत जेठ ३१ र ३२ गते देखि असार ३ गतेसम्म प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गराइरहेका ३ जना बिरामीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुको उपचारमा संलग्न ४२ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा राखिएका ४२ जना मध्ये ५ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको प्रदेश अस्पतालका
सुर्खेतमा आरडिटी जाँचेर घर पठाइएका व्यक्तिको मृत्यु
सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका एक जनाको मृत्यु भएको छ। भेरीगंगा–५ भर्रेनीका एक युवकको आइतबार विहान मृत्यु भएको हो। क्वारेन्टिनमा आरडिटी (र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट) गर्दा उनमा कोरोना एन्टीबडी नदेखिएपछि घर पठाइएको भेरीगंगा नगरपालिकाका उपमेयर रेणु ढकालले जानकारी दिइन्। छिन्चुमा रहेको शारदा माविमा रहेको क्वारेन्टिनमा १४ दिन बसेका उनी जेठ २९ गते घ
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शनिबार थप ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतबाट दिनप्रतिदिन कर्णालीमा आउने नागरिकको संख्या बढेसंगै संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । प्रदेश अस्पताल पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परिक्षणमा दैलेखका १९ जना र जाजरकोटका १ जनमा पुष्टि भएको हो । यस्तै राप्ती स्वास्थ्य प्रतिस्ठान, दाङमा गरिएको परिक्षणमा सल्यानका २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कर्णालीमा थप ९ जनामा काेराेना पुष्टि,संक्रमितकाे संख्या १२३३
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । भारतबाट दिनप्रतिदिन कर्णालीमा आउने नागरिकको संख्या बढेसंगै संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सुर्खेतका ६ जना, दैलेखका २ जना र जाजरकोटका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारीले बताए । हालसम्म जम्मा पुष्टि भएको संख्या एक हजार दुई सय ३३ पुगेको छ
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा थप १२० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । भारतबाट दिनप्रतिदिन कर्णालीमा आउने नागरिकको संख्या बढेसंगै संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । बिहीबार सुर्खेतका ३४ जना, दैलेखका ८६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारीले बताए । हालसम्म जम्मा पुष्टि भएको संख्या एक हजार दुई सय २४ पुगेको छ । नयाँ संक्रमण प
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराउन आएका ३ जनालाई कोरोना पुष्टि भएपछि इमर्जेन्सी कक्ष सिल,४२ स्वास्थकर्मी क्वारेन्टाइनमा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराउन आएका ३ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष सिल गरिएको छ । समुदाय स्तरबाटै उपचार गराउन जेठको ३१ र ३२ गते दैलेखबाट आएका दुई जना बिरामी र सुर्खेतका १ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले बताए ।डाक्टर खड्काका अनुसार प्रदेश अस्पतालको इमर्जेसी वार्डमा उपचार गराइरहेका ३ जनामा को
कर्णालीका थप १८ जनामा कोरोना पुष्टि, जम्मा संक्रमितको संख्या ११०४ पुग्यो (कुन जिल्लामा कति?)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मंगलबारसम्म एक हजार ८६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएर ३४२ जना घर फर्किएका छन् । कर्णालीमा भारतबाट आउने नागरिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढेका कारण पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा कर्णाली छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दुल्लु अस्पताल दैलेख, सल्यान अस्पताल लगायतबाट हालसम्म ३४२ जना सक्रमितहरू नि
कर्णालीमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या एक हजार ८६ पुग्याे (कुन जिल्लामा कति ?)
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । भारतबाट दिनप्रतिदिन कर्णालीमा आउने नागरिकको संख्या बढेसंगै संक्रमितको संख्या निरन्तर थपिंदै गएको छ । मंंगलबार सुर्खेतका ४ जना र दैलेखका ५ जना गरी जम्मा नयाँ संक्रमित संख्या ९ रहेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म जम्मा पुष्टि भएको संख्या १०८६ पुगेको छ । नयाँ संक्रमण पुष्टि हुने ९ जना मध्ये सुर्ख